ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် ရခိုင်ခရီးစဉ်မှာ အသိုင်းအဝန်းနှစ်ရပ်လုံးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် ရခိုင်ခရီးစဉ်မှာ အသိုင်းအဝန်းနှစ်ရပ်လုံးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာပြည် ဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေး မစ္စတာ Vijay Nambiar ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွင်း ဇွန်လက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် နေရာ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသူတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ရပ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေ ပြေလည်အောင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေ နဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လကစတင်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ မူစလင်ရိုဟင်ဂျာတွေအကြား ပဋိပက္ခတွေမှာ လူ (၁ဝဝ) ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ လူတစ်သိန်းကျော် မူလနေထိုင်ရာဒေသတွေကနေ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းပါတယ်။
မစ္စတာ Vijay Nambiar ဟာ အစိုးရဲ့ ဖိတ်ကြားလျက်အရ ဒီဇင်ဘာ (၁၆)၇က်နေ့ကစပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီနဲ့အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားရောက်ခဲ့တာပါ။
ဒီခရီးစဉ်မှာ မစ္စတာ Nambiar အနေနဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ရပ်လုံးက နေရာရွှေ့ပြောင်းရသူတွေရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို တွေ့မြင်သိရှိခဲ့ရကြောင်း၊ နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ် တွေနဲ့အတူတကွရော၊ သီးခြားစီပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်အောင်ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ က စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်၊ နှစ်ဘက်အသိုင်းအဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ ပြဿနာတွေဖြေရှင်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်စရာ နည်းလမ်းတချို့ကို တင်ပြခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီတင်ပြချက်တွေဟာ အမြော်အမြင်ရှိပြီး၊ လက်တွေ့ကျကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းဆီကို စာတစ်စောင် ရေးသားပေးပို့ခဲ့ရာမှာ- ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွား ဖွယ်ရာနိုင်ငံရေး ရှုထောင့်တွေ ရှိနေ ပေမဲ့၊ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့ မိမိတို့အစိုးရအနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားကြောင်း၊ ပြန်လည်နေရာချရေး၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး အပါအဝင် မွေးစာရင်း၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်၊တိုင်းပြည်အတွင်းသွားလာခွင့် စတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း ပြည်တွင်းစံနှုန်း၊ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားချင်းစာနာကူညီ ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာတွေကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံဆောင်ရွက်ဖို့ ပိုင်းဖြတ်ထားကြောင်းတွေပါဝင်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
This entry was posted on December 21, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဥပဒေဆိုင်ရာများကိုပြုပြင်ဖို့ ရှေ့နေအဖွဲ့အကြံပြု
RNDP ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ ??? →